सम्भो’गपछि बाथरुम छिरेर किन रुन्छ’न महिलाहरु ? पत्ता लाग्यो कारण, पुरुषहरुले थाहा पाउ’नुपर्ने – List Khabar
Home / रोचक / सम्भो’गपछि बाथरुम छिरेर किन रुन्छ’न महिलाहरु ? पत्ता लाग्यो कारण, पुरुषहरुले थाहा पाउ’नुपर्ने
सम्भो’गपछि बाथरुम छिरेर किन रुन्छ’न महिलाहरु ? पत्ता लाग्यो कारण, पुरुषहरुले थाहा पाउ’नुपर्ने
admin December 16, 2021 रोचक Leaveacomment 259 Views
एजेन्सी । भनिन्छ : मानव जीवनलाई सफल बनाउनका लागि चाहि’ने आधारहरु मध्ये यौ’ ’न पनि एक हो । यौ’न मानव जीवनको एक नियमित प्रकृया भएका कारण यो कुनै जटिल वा फराकिलो विषय होइन, जति आम मानिसले यसलाई कठोर सम्झि’रहेका छन् ।
यौ’ ‘नलाई मानिसले जति अप्ठेरो रुपमा सोच्दै जान्छ त्यो उतिनै अप्ठेरो मो’डतर्फ प्रवेश गर्छ । यद्यपी यौ’नसम्पर्क गर्नु अघि वा पछिका लागि आफ्नै अनुशासन पनि हुने गर्छन् । यौ; नलाई धेरै नै सहज ठा’नेर आचरणहीन उच्श्रृङखल बनाउन थालियो भने यसले फेरि जीव’नमा अर्को जटिलता सिर्जना गर्न पुग्छ ।
यौ’न सन्तोत्पादन गर्ने प्रकृयामात्र नभएर शा; रिरीक तथा मानसिक खुसी दिलाउने एक बलियो सम्बन्ध पनि हो । त्यस कारण पनि यसले मानव स्वा’स्थ्यलाई फाइदा नै पुग्ने गर्छ । तर आजहामी एउटा नयाँ वि’षयमा चर्चा गर्दै छौं ।
अक्सर हामीले यौ’न पछाडि पुरुषहरु थाक्छन् भन्ने कुरा सुन्दै र अनुभव गर्दै पनि आइरहेका हुनसक्छौं । तर यौ’न सम्पर्क पछाडि महिला निराश बन्ने गरको कु’राहरु हामीले कमैमात्र सुनेका हुन सक्छौ ।
किन की वीर्यस्खलन पछाडि थकित पुरुषले महिलासँग अन्तरंग नगर्ने गरेकाे विभन्न अनुसन्धानले देखाउँदै आएका छन् । त्यसकारण पनि अधिकांश पुरुषहरुले यौ’ ‘’नसम्पर्कपछि महिलासँग सहवासको अनुभव साट्ने गर्दैनन् । जसले गर्दा सहवासमा साथ दिइरहेको आफ्नो पार्टनरले से’ ‘क्स पछाडि के सोचिरहोला ? उसलाई कस्तो लागिरहेको छ भन्नेमा पुरुष’हरुले हेक्का राख्दैनन् ।
तर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अ.नुसन्धानले यौ’न सम्पर्क पछि महिलाहरु निराश हुने गरेको पत्ता लगाएको छ । त्यतिमात्र होइन सेक्स पछाडि त्यसरी महिलाहरु निराश बन्नुका केही कार’णहरुसमेत निक्र्यौल गरेको छ ।
क्वीन्सलैण्ड यूनिवर्सिटी अफ टेक्नोलोजीले गरेको अनुसन्धान अनुसार यौन सम्पर्कको क्रममा चरमसुख, अत्यधिक आनन्दको अनुभुतिसंगै निराशा पनि एक प्रकारको भावनात्मक अभिव्यक्ति हो ।
सहमतिमा यौ; न स; म्बन्ध राखिसकेपछि पनि धेरै महिलाहरुमा निराशाको भावना जन्मिन्छन् र यो ‘म’नोवैज्ञानिक समस्या भएको अनु”सन्धानकर्ताहरुको भनाई छ ।
२ सय ३० महिलाहरुमाथि गरिएको अनुसन्धानमा धेरै महिलाहरुले यौ’ ’न सम्पर्कपछि तनाव र निराश महसुस गरेका थिए । कयौं महिलाहरु यौ’ ‘न सम्पर्कपछि बाथरुममा रुने पनि गरेको अ.नुसन्धानकर्ताहरुले दावी गरेका छन् । कुनै–कुनै महिलाहरुमा यो स’मस्या धेरै रहेको र कुनैमा थोरै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यौ’ ’नपछि आफ्नो महिला पार्टनको निधार चुम्ने, सुम्सुम्याउने र अंगालोमा राखेर मिठा मिठा कुरा गर्नुभयो भने उनीहरु खुसि हुन्छन । महिलाहरु पुरुषको तुला’माना ज्यादै भावानात्कम र समावेदनशिल हुने भएका कारण यी कुराहरुको ख्याल पुरुष पा’र्टनरले राख्न आवश्यक ठानिन्छ ।
Previous उत्तर कोरियाका किम योङ जुको निधन
Next महिलाले एकचोटी अ:बस्य पढ्नै पर्ने म’नछुने कथा…हेर्नुहोस